किनकी मलाई लाज लाग्छ, आफ्नै देशको नेतृत्व तहको नालायकिपनदेखि, अरूलाई के भनुँ ? – Sanghiya Online
भारतले सीमाना मिचेको कुरो नौलो होइन । भारतले बेला-बेला दशगजा र नेपाली सीमानामा बाँध लगायतका संरचना बनाउने कार्य पनि नयाँ रहेन । सुस्ताको समस्या दशकौंसम्म जस्ताको तस्तै छ । उता चीन र भारत दुवैले आफ्नो हिसाबले सीमाना हडप्दै छन् । भारत दक्षिण एसियाको शक्तिशाली देश हो । विश्व राजनीतिमा पनि उसको प्रभाव कम छैन । हुन त साना, निम्न आर्थिक स्तर भएका कमजोर मुलुकको पनि सार्वभौमसत्ता हुन्छ । अस्तित्व स्विकार्नुपर्छ । तर ‘ठूला’ को विशेषता नै हो मिच्ने, हेप्ने, पेल्न खोज्ने । सायद नेपाल आर्थिक रूपले शक्तिशाली भइदिएको भए उसले पनि यहि गर्थ्यो र तपाईं हामी आफ्नो भूमि बढ्दै गएकोमा, सेनाले अन्य देशका नागरिकलाई हेपेकोमा ‘सीमाको रक्षार्थ’ गरेको भन्दै ताली बजाउँथ्यौं ।
यता नेपाल आफैले आफ्नो स्तर झुकाउने गरिरहेको छ । जब हाम्रो ९५% भन्दा बढी निर्भरता चाहे त्यो खाद्यान्न, लत्ताकपडा वा विकास निर्माणका काम सबै भारतमाथी नै छ भने कुन मुखले हामी उसँग लड्ने, शिर ठड्याएर कुरा गर्ने ? रह्यो हामी नागरिकका कुरा, हामीले हल्ला गर्दैमा, भारतको नक्सा च्यात्दैमा हुने केही हैन । आज दूतावासमा पत्थर हान्नेहरू भोलि सत्तामा पुगे भने पनि ‘बार्गेनिङ पावर’ हुन्न । पहिला देशभित्रका राष्ट्र मजबुत बनाउने हो, तब मात्र समग्र देश मजबुत हुन्छ । हाम्रो देश सँधै गृह कलह, द्वन्द र कथित परिवर्तन ल्याउनमै यति व्यस्त रह्यो कि, सिंहदरबार र काठमाडौं बाहिर पनि नेपाल छ भन्ने बिर्स्यो ।
नाकाबन्दीताका एकजना विदेशी कूटनीतिज्ञले भनेको सम्झिन्छु, ‘स्वाभीमानले भात दिँदैन ।’ मुलुक बलियो हुन चाहिने भनेकै आर्थिक विकास हो । नेपाल आर्थिक रूपमा बलियो छैन र आगामी दशकसम्म नि होला जस्तो मलाई लाग्दैन । तसर्थ अहिलेको ‘राष्ट्रवाद’ ले खान, लगाउन र बस्न समेत पुग्दैन । पहिला देश बने पो बाहिरबाट जोगाउनु । तसर्थ माफ गर्नुस्, कालापानी वा लिपुलेक सन्दर्भमा म कुनै उत्तेजक टिप्पणी गर्दिनँ । कुनै राष्ट्रवाद फेसबुकका भित्तामा पोख्दिनँ । किनकी मलाई लाज लाग्छ, आफ्नै देशको नेतृत्व तहको नालायकिपनदेखि । म अरूलाई के भनुँ?